Yini ongayibona ku-Extremadura | Izindaba Zokuhamba
Yini ongayibona e-Extremadura
UMariela Carril | | España, Yini ongayibona
Extremadura Ungomunye wemiphakathi ezimele yaseSpain futhi yakhiwe yizifundazwe ezimbili, iBadajoz neCáceres. Izwe elinezinkulungwane eziningi zeminyaka yomlando, njengoba kufakazelwe ama-dolmens, imidwebo yomhume nezithixo ezigcinwe kuze kube namuhla.
Lezi zinkulungwane zeminyaka zisiletha izindawo eziningi zezivakashi kanye nesiko elicebe kakhulu, ngakho-ke namhlanje siphakamisa uhambo oluya e-Extremadura nezindawo zalo ezihehayo. Namuhla-ke ongakubona ku-Extremadura.
2 Yini ongayivakashela e-Extremadura
Kuyindawo ukuthi iseningizimu-ntshonalanga yeNhlonhlo Yase-Iberia futhi njengoba sishilo phambilini, yakhiwe yizifundazwe ezimbili ezinhloko-dolobha yazo okuyidolobha elinabantu abaningi. Ngefayela le- isimo sezulu esifudumeleUtamatisi, upelepele, ugwayi namagilebhisi kutshalwa lapha, lapho kwenziwa khona iwayini elihlwabusayo.
I-Los ama-romanos bahlala lapha, bakha imigwaqo, amadolobha acebile anamasekisi, izimakethe kanye nezakhiwo zomphakathi. Ngokwesibonelo, iMerida yaba idolobha elikhulu, elinempilo, nelicebile ngamasiko. Kamuva umbuso wawuzowa futhi kufike abantu bezinye izizwe, phakathi kwabo okwakukhona Ama-Visigoths, bashiya amakhaya abo Ama-Saracens phakathi neNkathi Ephakathi.
Este isikhathi samaSulumane Wayengacebile kangako kunowaseRoma futhi yathatha amakhulu amahlanu eminyaka kwaze kwaba iReconquest, ngoMbuso waseLeón kuqala noMbuso waseCastile kamuva. Ngemuva kokuhlanganiswa kwemibuso yomibili lezi zifunda ezimbili zase-Extremadura ngaphansi kwale miqhele nazo zazihlangene. Ukuhlangana kwamaJuda, amaKrestu namaSulumane kwaphela ngomyalo wamaKhosi amaKhatholika wokuthi bonke kumele baphendukele ebuKristwini kungenjalo bazoxoshwa.
Abaningi babavakashi baseSpain abafika eMelika ngekhulu le-XNUMX babevela e-Extremadura. Ngokwesibonelo, UHernán Cortés, uFrancisco Pizarro, uPedro de Valdivia… Kamuva izingxabano zangaphakathi kanye neMpi Yenkululeko yaseSpain zazizofika, futhi ezandleni zakhe, usizi nokuhlupheka kanye nokufuduka okukhulu kwangaphakathi ukubalekela kubo.
Yini ongayivakashela e-Extremadura
Uma sesishilo ukuthi i-Extremadura inamakhulu eminyaka yomlando, ngokweqiniso kufanele sikhulume ngefa lalawo makhulu, izinkulungwane zeminyaka. Kwa inkathi yamaRoma singavakashela i- Merida IsiRoma. Amanxiwa amaRoma asePlaza Margarita Xirgu futhi kuvula iwindi lendlela yokuphila yamaRoma kule nhlonhlo. Ikona Amagugu Emhlaba futhi enye yezindawo ezibaluleke kakhulu zemivubukulo eSpain.
Amanxiwa amaRoma aphakathi kwezindonga zaleli koloni: kuneshashalazi, indlu yezemidlalo kanye nenkundla yezemidlalo, isekisi kanye nesonto. Kukhona ifayela le- Umsele Wezimangaliso, iPórtico del fro, i-Arch of Trajan, iNdlu yaseMitreo neThempeli likaDiana. Ngaphandle kwezindonga kukhona omunye umsele, owaseSan Lázaro, ibhuloho elingaphezu komfula iGuadiana, Alange iziphethu ezishisayo (Amakhilomitha ayi-18 ukusuka eMérida, kukholakala ukuthi isukela ngekhulu lesi-XNUMX AD, nezindlu zayo), namadamu amabili, iProserpina neCornalvo.
Lesi sakhiwo semivubukulo sivulwa kusuka ngo-Ephreli kuya kuSepthemba kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-10 ntambama naphakathi kuka-Okthoba noMashi kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-6: 30 ntambama. Ukungena kubiza ama-euro ayi-15 kusethi yonke nama-euro ayisithupha etsheni lesikhumbuzo ngalinye. Enye indawo yamaRoma yi Amanxiwa eCáparra, amakhilomitha ambalwa ukusuka edolobheni lasePlasencia. Kukhona umzila olandelwa isivakashi futhi omqondise esikhungweni sokuhumusha, ama-necropolises amathathu, amasango kanye nenkundla yemidlalo. Kungenwa mahhala.
Ukushiya isikhathi samaRoma singena ku- isikhathi sama-arabi con I-Alcazaba, ukuhlala kwamakhosi esilinganiso selokhu kuqale iBadajoz. Namuhla lokho esikubonayo kususelwa enkathini ka-Almohad, ngekhulu le-XNUMX, kodwa kunenkolelo yokuthi imvelaphi yayo isukela ekhulwini lesi-XNUMX.
I-Alcazaba iyi- inqaba eyayilawula nomngcele nePortugal futhi likhulu kakhulu futhi liyamangalisa. Ineminyango emine futhi ungangena ngayo. Ngaphezu kweminyango yeCoraxa neYelves, kukhona i-Apéndiz neminyango yeCapitel, evela esikhathini se-Almohad.
Kukhona nemibhoshongo, i-Torre de Espantaperros, e-octagonal, evelele phakathi kwayo. Ngaphakathi kunePalace of the Counts of Roca enephathiyo namuhla esebenza njengeProvincial Archaeological Museum, iTower of Santa María, iTower of the Episcopal Palace kanye nezingadi.
I-Las ukubukwa kwe-panoramic kodonga lweLa Alcazaba zinkulu. Kungenwa mahhala futhi akukhokhiswa imali yokungena. Itholakala eCerro de la Muela. ECáceres kukhona I-Royal Monastery yaseGuadalupe Kususelwa endaweni encane eyaba yisonto laseMudejar ngaphansi kokubusa kuka-Alfonso XI. Isonto lezindela libe nezinguqulo ezintathu kanti elamanje lisesitayeleni seGothic. I-altarpiece inezithombe zendodana ka-El Greco, uJorge Manuel Theotocópuli.
Inendawo yangaphakathi enhle kakhulu futhi iminyuziyamu yayo ikufanele: enye eyokuhlobisa, enye eyokudweba nokubaza, kanti enye eyezincwadi ezincanyana. Isigodlo sivula kusukela ngo-9: 30 ekuseni kuya ku-1 ntambama futhi kusukela ngo-3: 30 kuya ku-6 ntambama. Izinga elijwayelekile ngama-euro angama-5. Esinye isigodlo sezindela esithokozisayo yi I-Royal Monastery yaseYuste, isakhiwo esiyisigodlo sezindela lapho achitha khona izinsuku zakhe zokugcina UCarlos V. Ukuhlala kwakhe kwamenza waba muhle kuphela. Isigodlo siyingxenye yeNational Heritage yaseSpain. Ebusika ivulwa kusukela ngoLwesibili kuye ngeSonto kusuka ngo-10 ekuseni kuye ku-6 ntambama, kuthi ehlobo kusuka ngo-10 ekuseni kuye ku-8 ntambama. Ukungena kubiza ama-euro angama-7.
Uma sikhuluma ngamasimu wemvelo ngakho-ke kuyithuba le- Ipaki Likazwelonke LaseMonfragüe, kubathandi bezimbali ne-ornithology. Itholakala kunxantathu owenziwe yiPlasencia, Navalmoral de la Mata, neTrujillo. UMfula iTagus uyikholamu yawo kanti i-UNESCO isimemezele ipaki Indawo Yokuhlala.
Kulezi zintaba kukhona amadamu, imifudlana, amadwala, amahlathi nezihlahla okuyindawo ekahle yokuhlala Izitshalo nezilwane ezahlukahlukene nezicebile. Izinyoni zazo zonke izinhlobo, onogolantethe abamnyama, amanqe, izinkozi, nezilwane ezinjengama-wildcats, izinyamazane, ama-otter ...
Ngaphakathi kwepaki kunenqaba yaseMonfragüe, e-Arab, eyayihlala ngaleso sikhathi yiNkosazana uNoeima, ngokwenganekwane eyayithandana nomKristu futhi ngenxa yalesi sizathu yajeziswa. Kukhona nedolobha lase IVillareal de San Carlos, lapho ungahlala khona, udle futhi uvakashele izikhungo zabavakashi ukuthola ulwazi mayelana nale ndawo. Kunemizila ebhalwe uphawu edlulisa ipaki futhi ikakhulukazi ibheke empophomeni yeGitano, eweni elingamamitha angama-300 ngaphezulu koMfula iTagus. Lobo buhle!
Enye indawo yokwenza ukuhamba ngezinyawo futhi ukungena emachibini emvelo kungaba umlingisi weMelero. I Isikhumbuzo Semvelo saseLos BarruecosE-Cáceres, uzobona indawo enamadwala ehlaba umxhwele enamachibi nezindlu. I- Orellana Ibhishi Kungu-ebhishi ledamu eligama elifanayo, e-Orellana la Vieja, eBadajoz.
Kuyinto a ifulegi eliluhlaza okwesibhakabhaka futhi kuyibhishi elingaphakathi nezwe. Kuyaziwa nangokuthi iPlaya Costa Dulce futhi ungenza imidlalo ehlukahlukene yamanzi. Ogwini lwelinye ichibi, ichibi likaGabriel y Galán, kepha eCáceres, IGranadilla Complex Historical Complex.
Kwakungu- idolobha elasungulwa amaSulumane ngekhulu lesi-XNUMX, ebiyelwe ngodonga, nasenqubweni yokutholwa ukuze ibe indawo yamasiko izivakashi. Igcina izindonga zayo ze-Almohad, inqaba iphenduke inqaba yamaKrestu, indawo yokuhlala yomndeni yabantu ababalulekile, kwesinye isikhathi eyokuqala ezinhlakeni zabo, kanye nesonto lesifunda kusukela ngekhulu le-XNUMX
Ngalolu hlu olufushane lokuthi yini ongayibona ku- Extremadura impela siyasilela. Futhi ingabe i-Extremadura ingumphakathi omkhulu kakhulu, ongenakukwazi ukuwuqeda wonke uma unezinsuku ezimbalwa. Uma lokhu kuyicala lakho, ithiphu elilodwa lokugcina, ukugxilisa izindawo nemibono: IMerida neCáceres akunakuphikwa, iBadajoz nayo, kepha ngaphezu kwalokho esikufakayo, uma ufuna okuthile okuthule kunale mizi, iya emadolobheni. Lapho ungaphumula ngempela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » Yini ongayibona e-Extremadura